Umkhiqizi kanye Nomhlinzeki We-Wholesale Dropshipping | Ngesikhathi
Umsizi Wokuthumela Izinzuzo zomthwaloKulabo abafisa ukuba ngosomabhizinisi, iDropshipping iyindlela enhle yebhizinisi ngoba kulula ukuyifinyelela. Ngokuthumela okuqondile, ungahlola ngokushesha okwehlukile ...
Kosomabhizinisi abafisayo, iDropshipping iyindlela enhle yebhizinisi ngoba kulula ukuyifinyelela. Ngokuthunyelwa okuqondile, ungavivinya ngokushesha imibono ehlukene yebhizinisi ngamaphutha anqunyelwe, okukuvumela ukuthi ufunde okuningi mayelana nokuthi ungayikhetha futhi uyithengise kanjani imikhiqizo efunwayo. Kunezinye izizathu zokuthi kungani ukulethwa ngqo kuthandwa kangaka.
1. Kudingeka izimali ezingaphansi
Mhlawumbe inzuzo enkulu yokuthengisa ngqo ukuthi ungavula isitolo se-e-commerce ngaphandle kokuthi utshale izinkulungwane zamadola ekuqoqeni ngaphambili. Ngokwesiko, abathengisi kumele basebenzise imali eningi ukuthenga i-inventory.
Ngemodeli yokuhambisa eqondile, awudingi ukuthenga umkhiqizo ngaphandle kokuthi usuthengisile futhi usuyitholile inkokhelo evela kukhasimende. Ungaqala ukuthenga imikhiqizo bese uqala ibhizinisi lokuthengisa eliqondile eliphumelelayo ngemali encane kakhulu ngaphandle kwenani elikhulu lokutshalwa kwezimali okuphambili. Ngaphezu kwalokho, njengoba ungathembisi ukuthengisa nganoma iyiphi i-inventory ethengwe kusengaphambili njengokuthengisa kwendabuko, kunengozi encane yokuvula isitolo esitolo.
Lapho ungadingi ukubhekana nemikhiqizo ebonakalayo, kulula kakhulu ukwenza ibhizinisi le-e-commerce. Ngokuthunyelwa okuqondile, akudingeki ukhathazeke ngalokhu:
Indawo yokuphatha noma yokukhokha
Pakisha bese uthumela i-oda lakho
Landelela ukufakwa kwezizathu zezimali
Ukuphatha ukubuyisa nokuthunyelwa kwangaphakathi
Qhubeka noku-oda imikhiqizo futhi uphathe ukuphrinta kwamazinga okusungula
3. Ikhanda eliphansi
Njengoba ungadingi ukubhekana nokuthengwa kwempahla noma ukuphatha izimpahla, izindleko zakho eziphezulu ziphansi kakhulu. Eqinisweni, izitolo eziningi eziphumelelayo zokuthengisa eziqondile ngamabhizinisi asekhaya, adinga kuphela ikhompyutha ephathekayo kanye nezinye izindleko zokuphindaphinda zokusebenza. Njengoba ukhula, lezi zindleko zingakhuphuka, kepha zisephansi ngokuqhathaniswa namabhizinisi endabuko omzimba.
4. Indawo eguquguqukayo
Ibhizinisi lezimpahla lingaqhutshwa cishe noma kuphi nge-Intanethi. Uma ukwazi ukuxhumana kalula nabahlinzeki namakhasimende, ungagijima futhi uphathe ibhizinisi lakho.
5. A anhlobonhlobo imikhiqizo ongakhetha kuzo
Njengoba akudingeki ukuthi uthenge imikhiqizo ezothengiswa ngaphambi kwesikhathi, unganikeza abathengi abangaba khona uhla lwemikhiqizo ethandwayo. Uma umphakeli egcina izinto, ungabhala izinto ezithengiswayo esitolo sakho se-inthanethi ngaphandle kokukhokha okungeziwe.
6. Kulula ukuhlola
Ukuthengisa okuqondile kuyindlela elusizo kubaninimabhizinisi abavula izitolo ezintsha futhi abafuna ukuhlola ukulangazelela kwamakhasimende abo ezinye izigaba zomkhiqizo, njengezesekeli noma imigqa emisha yomkhiqizo. Ngokufanayo, inzuzo enkulu yokuthunyelwa okuqondile yikhono lokufaka ohlwini futhi uthengise imikhiqizo ngaphambi kokuzibophezela ekuthengeni inani elikhulu lempahla.
7. Kulula ukunweba
Ngebhizinisi lendabuko lokuthengisa, uma uthola inani eliphindwe kathathu kunama-oda, imvamisa udinga ukwenza umsebenzi ophindwe kathathu. Ngokusebenzisa abahlinzeki bokuthumela ngqo, iningi lomsebenzi wokucubungula ama-oda angeziwe lizothwalwa ngumhlinzeki, likuvumela ukuthi wandise ngezinkinga zokukhula okuncane nomsebenzi ongekho kancane.
Ukukhula kokuthengisa kuzohlala kuletha umsebenzi owengeziwe, ikakhulukazi umsebenzi ohlobene nokwesekwa kwamakhasimende, kepha uma kuqhathaniswa namabhizinisi endabuko e-commerce, amabhizinisi asebenzisa isikali sokuthunyelwa ngqo ahle kakhulu.
Qala ibhizinisi lakho lokuthengisa eliqondile manje
Langaphambilini Ezokuhamba Olwandle
Olandelayo: Isevisi enezelwe inani